/ २०७५, ५ मंसिर बुधबार ०६:१८ प्रकाशीत
व्यस्त दैनिकीमा शारीरिक व्यायामका लागि समय निकाल्न कठिन हुन्छ । नियमित दौडने, पौडि खेल्ने, व्यायामशाला जाने र योग गर्न सधैँ समय नहुन पनि सक्छ । तर जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय नहुने हैन । १५ मिनेटको समय निकालेर घरको कोठामै सहजरूपमा गर्न सकिने व्यायामसमेत छन् जसले शरीरलाई फिट राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
क्रन्चेज : शरीरमा एप्स प्याक निकाल्न क्रन्चेज सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। यो सरल छ र सहजै घरको कोठामा समेत गर्न सकिन्छ। यसका लागि जमिनमा ढाडको सहारामा सुतेर खुट्टा सिधा फैलाउनु पर्छ। टाउकोको पछाडि दुवै हात राखेर शरीरको आधा भाग बिस्तारै उठाउँदै यो व्यायाम गर्नुपर्छ । सावधानी नअपनाउँदा डिस्क खुस्किन सक्छ । यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
स्क्वाट : खुट्टाको मांसपेशीलाई बलियो बनाउनका लागि यो एक्सरसाइज प्रभावकारी हुन्छ । यसको नियमित अभ्यासले खुट्टाको मांसपेशी बलियो बनाउँछ । यसले पिँडुला, थाईको मांशपेशीलाई बलियो बनाउँछ ।
पुसअप : यो हेर्दा नियमित गर्न सकिने सहज एक्सरसाइजको विधि हो । यसले तपार्इंको छातिको मसल्स त बलियो बनाउँछ नै, एप्स, ट्राइसेट निकाल्न र काँध बलियो बनाउनसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ । छाती र काँधको मसल बलियो बनाउन नियमित पुसअपले सघाउँछ । यसले स्वास्थ्यको रोगलाई समेत सहयोग पुर्‍याउँछ।
अमेरिकाद्वारा नेपाललाई १५ लाख खोप सहयोगः५० देखि ५४ वर्षका नागरिकलाई लगाइने
ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना खोप लगाइँदै
१. प्यूठानका २ खेलाडीको इपिएलमा डेव्यू
२. बडादसैँका शुभ साइत बिहान १०ः०२ मा
३. पहिलो नगर कमिटी बैठक सम्पन्न
४. बहुपति प्रथामा आधारित चलचित्र ‘टुल्की’को ‘फस्ट लुक’ तथा ‘टिजर’ सार्वजनिक
५. अखिल (क्रान्तिकारी) बुटवल उपमहानगरपालिका नगर कमिटिको अध्यक्षमा अर्याल चयन